တရုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Density Meter > အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာ > ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ is based on the principle of U-tube oscillation method, which perfectly combines Peltier's precise temperature control technology with high-definition video camera technology to not only provide accurate, stable and reliable test results, but also provide users with efficient and convenient test experience. High-definition video can see whether there is bubble influence in the sample, using pulse excitation, high-precision detection technology, convenient for users to accurately and quickly measure the sample density and density related parameters.
1. ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ Introduction
2: တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန် Built-in Peltier အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊
3: ပူဖောင်းများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုရှောင်ရှားရန် High-definition ဗီဒီယို၊
5: 21CFR အပိုင်း ၁၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးဝါးနှင့်လျှပ်စစ်လက်မှတ်တို့နှင့်အညီလိုက်နာပါ။
2. ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ Parameter
0 g/cm3 မှ3g/cm3
± ၀.၀၀၀၀၀၀ ဂရမ်/cm3
± ၀.၀၀၀၀၅ ဂရမ်/cm3
5â„ ƒ-65â„ ƒ
± ၀.၀၂â„ ƒ
၁၀.၄ လက်မ FTF အရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
USB၊ RS232၊ RJ45၊ SD ကဒ်၊ U disk
ဟုတ် / မဟုတ်အဆင့်လေးဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
အဆင့်မြင့်ကာကွယ်မှု MD5 ကိုအတည်ပြုရန်ဖိုင်ကိုတင်ပို့ပါ
110V -230V 50Hz / 60Hz
3. ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာFeature And Application
၅။ 21CFR အပိုင်း ၁၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးဝါးများနှင့်လျှပ်စစ်လက်မှတ်
4. Fields of use ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ
Digipol-D70 ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာU-tube oscillation နည်းလမ်း၏နိယာမကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီး Peltier ၏တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာနှင့် high-definition video camera နည်းပညာကိုစုံလင်စွာပေါင်းစပ်ပြီးသုံးစွဲသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများကိုထိရောက်အဆင်ပြေစေသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေစေပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်မြင့်ဗီဒီယိုသည်နမူနာတွင်ပူဖောင်းများရှိမရှိအလွယ်တကူကြည့်နိုင်သည်။ သွေးခုန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်သောထောက်လှမ်းခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ နမူနာသိပ်သည်းဆနှင့်သိပ်သည်းဆနှင့်ပတ်သက်သောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာတိုင်းတာရန်လွယ်ကူစေရန်အသုံးပြုသည်။
Jiahangဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာhas obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။How many years have your company made ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ?
hot Tags:: ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE